Afọ ole ka azụ dị ndụ? Bata choputa oge ozo azu azu | Azu
Carlos Garrido | | Azụ
Ekeme ndidi emesikere otele azu ka ndu, kedu ihe na-eme ka ọ dị ndụ n'ime akwarium ma eziokwu bụ na, n'ezie, enweghị m ike ịgwa gị otu afọ ole ọ dị n'ihi na azụ nwere ike ibi site na obere awa ruo afọ ole na ole, na-adabere ọtụtụ oge na nguzogide azụ, afọ ole ọ dị na otu esi azụlite ya.
Mgbe ha n'ime tankị azụ, ọ bụghị aquariums, ndị ọkachamara kachasị na-ekwu na ha nwere ike ịdịru 2-3 afọ n'ihi na azụ adịghị ejide ogologo oge n'ihi nrụgide ha bi n'ime ya. Ndị ọzọ na-ekwu na, ọ bụrụ na a na-elekọta ha anya nke ọma, ha nwere ike ịnọ ọtụtụ afọ ma soro gị na ndụ gị.
Nke bụ eziokwu bụ na azụ anyị na-azụta na-abụkarị pere mpe (ihe dị ka ọnwa abụọ) nke ha ga-eji nyere anyị aka ma ọ dịkarịa ala afọ ole na ole ma ọ bụrụ na anyị lekọta ha anya. Nakwa dabere na ụdị ahụ, ị ​​ga-eme ka ọ dị ogologo ma ọ bụ karịa karịa. Dịka ọmụmaatụ, azụ a na-eji ehicha windo, ndị na-ehicha ihe, nwere ike ịnọ karịa afọ 2 ma ọ bụrụ na ha dị mma ma ghara inwe nrụgide, na mgbakwunye na-eto nke ukwuu.
Ndị ọkachamara na-ekwu na azụ, na ezi usoro iwu ma lekọta ya nke ọma (chọpụta ogologo oge ka ị ga-aga n’erighị nri), ha nwere ike ịdị ndụ Afọ 10-15 na aquariums (ọ bụghị na tankị azụ) na ha nwedịrị ike ịgbatị afọ ahụ karịa, karịa nke nkịta. Mana dịka m gwara gị, ọ ga-abụrịrị nke aquarium a na-elekọta nke ọma ebe ọ na-enweghị ihe ọ bụla.
A "ndu ndu»Na-agwa anyị na nnukwu nha nke otu ụdị, nke kachasị ogologo ndụ ya, nke mere na ọ buru ibu, ọ ga-adị ogologo ndụ, n'agbanyeghị na ị ga-eleba anya na nke a maka akwarium gị, ị gaghị achọkwa azụ. buru ibu nke ukwuu n’ihi na ọ nwere ike iri azụ ndị ọzọ.
1 Ogologo oge ole ka azụ oroma na-adị ndụ?
2 Afọ ole ka azụ clown na-adị ndụ?
3 Ogologo oge ole ka azụ egbe dị ndụ?
4 Ogologo oge ka otu azụ guppy na-adị ndụ?
5 Ogologo oge ole ka azụ dị na mmiri?
6 Ogologo oge ole ka azụ dị n'oké osimiri?
7 Ogologo oge ole ka azụ mmiri oyi na-adị ndụ?
Ogologo oge ole ka azụ oroma na-adị ndụ?
A na-akpọkarị ọtụtụ azụ anyị na-azụ n’ụlọ ahịa a raara nye n’ere anụmanụ ndị e ji mere enyi azu oroma, azu kaapu ma obu azu azu. Ha bụ ụdị ndị kachasị ewu ewu na nke anyị na-ahụkarị na tankị azụ na aquariums. Ma, ọ bụghị ha kacha ogologo ndụ.
Azụ̀ ndị a esighi ike ma na-emebi emebi karịa ka anyị chere. Ọ bụ ya mere enwere ikpe nke anyị ji zụta otu n'ime obere anụmanụ ndị a ma ha ga-adị ndụ naanị ọnwa ole na ole, yana ụbọchị ole na ole. Ọ bụ eziokwu na iwu a anaghị emezu oge niile, ebe ọ bụ na iji nlekọta kwesịrị ekwesị, anyị nwere ike ime ka azụ oroma soro anyị nọrọ 2 ruo 3 afọ.
Ekwesiri iburu n'uche na azu ndi a na etolite na nnukwu ọdọ mmiri ebe ha na-etolite ma na-eto ngwa ngwa, n'agbanyeghị na ha bu nwata. Yabụ, ụdịdị ahụ niile dị na ụlọ ahịa nnụnụ na ụlọ ahịa anụ ụlọ dị obere.
Afọ ole ka azụ clown na-adị ndụ?
na azu clown ha bụ otu n'ime anụmanụ mara mma nke mmiri. Ya pụtara ìhè oroma na ọbara ọbara, jikọtara na ha White eriri, mee ka o doo anya. Ọ bụ eziokwu na n’ime otu azụ a, ihe karịrị ụdị iri atọ dị n’ụlọ.
N'ebe obibi ha, a na-ahụ azụ ndị a na mmiri ọkụ nke oke osimiri Pasifik, nke coral coral jupụtara na ya, nke anemones na-esonyere, nke na-echebe ha pụọ ​​na ndị na-eri anụ n'otu oge ahụ ha na-enye nri dị iche iche. Na ọnọdụ ndị a, anụmanụ ndị a na-ebi n’agbata afọ abụọ na iri na ise ihe dị ka, dabere, ee, na ụdị nke klou nke anyị na-ezo aka.
N'adịghị ka ụdị azụ ndị ọzọ na-azụkwa maka ndụ n'agha, azụ na-adịghị mma anaghị achọ nlekọta dị egwu, yabụ ha bụ ezigbo nhọrọ iji tinye n'ime akwarium anyị, nke, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọhụụ na-eme ma na-elekọta ha anya nke ọma, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ha site na 5 ruo 10 afọ.
Ogologo oge ole ka azụ egbe dị ndụ?
na azụ azụ Ha bụ otu n'ime azụ aquarium mara amara ama ama. Widedị ha dịgasị iche iche na-eme ka ha bụrụ anụmanụ mara mma, ọkachasị maka ụmụaka nọ n'ụlọ. Na ihu ọma ha, a ghaghi iburu n'uche na ha na ndi mmadu di nma, ya mere ha adighi egosi nsogbu mgbe ha na umu ndi ozo biri.
Njirimara ndị a niile mere ka azụ azụ dị ka otu n'ime azụ kachasị mma maka ndị niile na-amalite na ntụrụndụ a. Ọzọkwa, ọ bụ anụmanụ na-anaghị achọ nlekọta dị ukwuu, n'agbanyeghị na ọ bụ ezinụlọ nke Jehova azụ ma ọ bụ azụ azụ.
Ọ bụghị ihe ijuanya na azụ ndị a nwere ike ịnwe ndụ n'agha site na 5 ruo 10 afọ, ọ bụrụhaala na a na-elekọta ha anya nke ọma.
Ogologo oge ka otu azụ guppy na-adị ndụ?
na azụ azụ Ha bụ otu n'ime ụdị ndị na-azụ ihe na ndị agbụrụ nwere mmasị na ya. N'ime ụdị a, anyị nwere ike ịchọta ndị dị iche iche na ibe ha, n'ihe gbasara agba na morphology, ya mere ọ na-ewu ewu.
Ha bụ anụmanụ ndị bi na mpaghara mmiri dị ọcha, ọkachasị ndị nwere obere mmiri dị ka osimiri, ọdọ mmiri na ọdọ mmiri. Na gburugburu ebe obibi, anyị na-ahụ ha na mba nke Central dị ka Trinidad, Barbados, Venezuela na ugwu nke Brasil.
Njirimara nke mmiri nke anụmanụ ndị a ga-enwerịrị kwesịrị ịbụ: ọnọdụ okpomọkụ n’etiti ogo 22 na 28, ogo 25 bụ nke kachasị mma; pH kwesịrị ịbụ alkaline, ma ghara n'okpuru 6.5 ma ọ bụ karịa 8. Ọ bụrụ na anyị emezu ihe a niile, azụ a ga-enwe ike ịdị ndụ 2 afọ.
Njirimara zuru oke nke azụ Guppy
Ogologo oge ole ka azụ dị na mmiri?
Otu ihe na-echegbu ndị na-azụ ya bụ ogologo oge azụ nwere ike ịdị ndụ na mmiri. Ma, n'adịghị n'ihe anyị chere, ụmụ anụmanụ ndị a nwere ike ịnagide oge na-anọghị na gburugburu mmiri site na ọnọdụ ọnọdụ dị.
Ọ bụrụ na, n'ime mmiri, azụ dị na ebe nwere oke ikuku ụlọ oyi ma debe ya na ala nke na-adịghị amịkọrọ mmiri ngwa ngwa, ọ nwere ike ịdịru ndụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 awa.
Enwere ikpe nke azụ wụlitere, dị ịtụnanya dịka ọ nwere ike iyi, site na tankị azụ ma ọ bụ ọdọ mmiri. Ọ bụrụ na nke a mee, anyị ka na-ahụkwa azụ anyị dị ndụ, anyị ga-ewebata ya ọsọ ọsọ dị ka o kwere mee n'ime akpa nwere otu mmiri ahụ dị ka tank azụ ma ọ bụ ọdọ mmiri. Mgbe nke a gasiri, anyi aghaghi itucha ya nke oma site n’enyemaka nke iko, iji wepu aja o bula enwere, wdg. Ọ dị ezigbo mkpa ka anyị buru n’uche na anyị agaghị ejichapụ azụ ahụ n'ike iji zere imebi mmerụ mpụga. Mgbe ị hụrụ ya ole na ole Awa 24 N'ime akpa ahụ ma chọpụta na ọ dị mma, anyị ga-aga n'ihu weghachi ya na tankị azụ ma ọ bụ ọdọ mmiri.
Ogologo oge ole ka azụ dị n'oké osimiri?
N'ime usoro okike mmiri, e nwere ụdị na-adịghị agwụ agwụ, ọtụtụ n'ime ha na-akụ azụ. N'etiti ụdị azụ dị iche iche enwere ọtụtụ iche, ndụ ndụ agaghị adị obere.
Dị ka ọ na-adịkarị, azụ̀ ndị na-ebi n'oké osimiri na ogologo ndụ karịa ndị ibe ha na-ebi ogologo oge n'ọdọ mmiri na n'osimiri. E nwere azụ nke na-anaghị adị ndụ otu afọ, ebe ndị ọzọ na-adịru ọkara narị afọ. Wezuga, sturgeons na groupers a hụrụ na ihe karịrị 100 afọ. Ma ọ bụrụ na anyị ga-eme ka nkezi, afọ ndụ anyị na-egbu mmiri, anyị ga-asị na ọ dị nso na 20 afọ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata afọ ole azụ dị, o nwere usoro aghụghọ kwesiri ntụkwasị obi. Dị ka mgbanaka ndị ejiri ogwe osisi na-adọta, ọ bụrụ na anyị elelee akụkụ nke azụ, ha na-esekwa ahịrị usoro. Nke ọ bụla n'ime ahịrị ndị a gosipụtara otu afọ nke anụmanụ. Iji mee nke a, ọ dị mkpa iji nnukwu iko na-ebuli elu, ebe ọ bụ na anya gba ọtọ ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume.
Ogologo oge ole ka azụ mmiri oyi na-adị ndụ?
Azụ mmiri oyi na-agụnye ndị bi na ọdọ mmiri, osimiri na azụ ụlọ niile azụrụ maka aquariums na tankị azụ. Enwere ụdị dị iche iche, mana, n'adịghị ka azụ nke bi na mmiri mmiri, ha na-adịkarị obere ndụ.
Ọ bụrụ na tupu anyị ekwuo na azụ mmiri nwere ike iru oke ndụ dị elu, ọbụnadị iru 20 afọ na ọnụ ọgụgụ ka elu, azụ mmiri oyi na-enwekarị ndụ site na afọ abụọ ruo Afọ 15.
Anyị nwere olile anya na iji isiokwu anyị nwee echiche doro anya karị otele azu ka ndu na ndu nke obere azu (ma adighi obere) nke anyi n’enwe n’ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Azụ » Afọ ole ka azụ dị ndụ?
obere azụ dijo
Ọfụma azụm ka na-ebi afọ anọ
Zaghachi obere azụ
Azụ m dị afọ 5 ma nọ na tankị azụ ma ha ka nwere ihe fọdụrụ
Zaghachi lyneth :)
Enwerem ọdụm ọdụm ma ugbu a ọ dịrịla afọ 5
Azụ m nwụrụ taa, afọ iri na atọ mụ na ya. Enwere m oke egwu, enwere m etuto n’isi m nke toro n’oge na-adịghị anya. N'ụtụtụ a, ọ na-ehi ụra mgbe ọ na-eteta ụra n'isi ụtụtụ wee nwụọ n'ehihie.
Thu PainTer Ọhụrụ dijo
Enwere m ọdụm ọdụm ma ruo ugbu a ọ dịrị ndụ ruo afọ 13 mana na-ahapụghị ya n'enweghị nlebara anya
Zaghachi na Thu PainTer Ọhụrụ
Azụ mmiri oyi m nwere ike ịnwụ, nyere m aka!
Azụ m anwụworị, ọ gafee ọnwa 4
azu m di nwayoo choro iri !! Amaghi m ihe o nwere ... ubochi abuo m nyere ya nri ozo amaghi m ma nke ahu gabu ya. Enyemaka . dị ka ịnwụ anwụ
Enwere m azụ nwụrụ na Machị ma asọmpi m na ngwụsị ọnwa Disemba
Zaghachi Diego Martinez
m 4 afọ azụ nwụrụ na ọ bụ nnukwu teliskop
Enwere m azụ oscar nke were m afọ 13.
Kedu ka m ga esi eme maka pH na okpomọkụ ma ọ bụrụ na m nwere ọtụtụ ụdị cyclids na akwarium m
Parakeet m dị afọ iri na ise
òtù Achilles dijo
Enwere m Acanthurus Achilles ọ dịla na akwarium m maka afọ 4 otu ọnwa ...
o nweela ọtụtụ azụ, nke kachasị dịrị ndụ bụ ịrịgo: afọ iri na anọ !!!!!!! Ọ nwụrụ ụbọchị ole na ole mgbe nkịta m nke otu afọ ahụ gachara …… .. ma eleghị anya n'ihi mwute mgbe m na-ahụghị ya, amaghị m ma m ga-ahụ ọtụtụ, mana mgbe Hercules bịarutere fishbowl m ọnụ ọgụgụ kpaliri ka m na-ekwu, waving haha
Ndewo nkịta m abanyela ebe ahụ afọ atọ ma ọ chọghị ịkwaga nke ukwuu ma nọrọ n'ọnọdụ kwụ ọtọ ma na-eku ume ngwa ngwa
ọ bụghị ihe niile ha na-ekwu bụ eziokwu
Abụ m ọkà mmụta ihe banyere mmiri
Zaghachi lic. ximena
Enweela m characius ruo afọ 9 ma ọ buru ibu nke na ahụ adịghị dabara na nkwụ aka ya na onye ọzọ tozuru etozu.
Ndewo, enwere m azụ nke naanị ya nọ na tank mmanụ 50 lita ma ọ nweelarị afọ iri na ise na amaghị m ma ọ bụrụ na ndị ọzọ na eziokwu ndị dara ogbenye anaghị enwe nnukwu nlekọta
Enwere m azụ̀ oroma, ụdị nke na-eri pesetas 100 n'oge ahụ, na n'ime iko azụ iko, nke ndị a na-emebu, m ga-adị ndụ afọ iri na asaa. N'ezie, na-agbanwe mmiri ọ bụla ụbọchị abụọ-atọ na mgbe nhicha nkume na ala ọma.
Maka obere azụ, ọ bụ obere ihe nkiri mgbe ọ nwụrụ.
Ha hapụrụ m azụ abụọ na arịrịọ, ma mgbe ụbọchị atọ nwụsịrị, ha ebiela afọ anọ ma m na-elekọta ha nke ọma mana amaghị m ihe merenụ.
Ọnye na -bụ Luis Eduardo Manotas? dijo
Azụ nke Aequidens diadema (mojarrita) bụ onye na-eri ọnya nke ndị na-eme mkpọtụ (anwụnta) na-ebunye Dengue, Chikungunya na Zica; ọ na-adaba na mmiri nke ọdọ mmiri nke ụlọ maka iji mee ụlọ ma hụ na mkpochapụ isi iyi nke anwụnta.
Zaghachi Luis Eduardo Manotas
Azu m aburula 100, amaghi m ma o bu azu ma obu mbe mmiri xD!
azụ m bụ afọ 11 gara aga na tank azụ bụ 35 cm site 16 cm, na ọ dị mma, m tụfuru anya!
anyị nwere azụ dị afọ iri abụọ
Zaghachi ka fina mila capellades
Enwere m azụ n'ụlọ n'ụlọ tank azụ ma ha agbaala m afọ iri na ise ọzọ afọ iri na isii (azụ ọla edo na mmiri ochie akpọkwara ndị na-ehicha ala)
Ọfọn, m na-agbanwe mmiri na azụ m kwa ọnwa 3 ma ọ bụ karịa ma ọ dị na tank azụ nke na-anaghị adabakwa ọzọ. O mela ka anyị buru ibu! Enwere m olileanya na ọ ga-adị afọ iri abụọ.
Mara: ọ bụ otu n’ime ihe ịchọ mma mmiri oyi ahụ
Enwere m azụ o kere nke ahụ bụ nzuzu ma ọ dịrịla ruo mgbe ọ na-akpụ akpụ, ọ bụ 3 wee gbuo ha ugbu a naanị ya ma ọ nweelarị ihe dị ka afọ anọ m, na ọdụ ụgbọ mmiri dị mfe na enweghị nnukwu nlekọta. Agbakwunyere iji ya maka usoro ihe ọmụmụ. Ọ anaghị anwụ anwụ hahaha.
Na-amasị m… M azụ m si nha nke a phalanx. Taa ha nwere nke ejiri aka mechie. 5 afọ mmiri oyi na tankị azụ. O doro anya na m gbanwere ha ibu. Ma m ga-achọ ka ị dị ogologo ndụ ...
Ha nyere m obere azụ 17 nke mmiri oyi na ụbọchị 15 gara aga ha na-anwụ. Amaghị m ihe mere ha. Ha na ha nwere ọnwa anọ tinyere ọnwa isii ha na onye ọ bụla nyere m.
Biko nyere aka dijo
Nkịta m Dorozi riri azụ m ma echere m na ọ dị ndụ n'ihi na m na-anụ ka ọ na-eku ume
Zaghachi iji nyere aka biko
Enwere m telescopic dị afọ 2 na m ga-elekọta ya ka ọ dịrị afọ 5 ọzọ.
Ọfọn, ọ bụrụ na ha nwere ike ịnọ ogologo oge, anyị nọ n'ụlọ nwere azụ atọ n'ime aquarium ahụ kemgbe 2008, otu nwụrụ na 2 afọ gara aga, mgbe ahụ ọnwa asatọ ọzọ gara aga ma enwere onye dị ndụ ma anyị debe ya.
Enwere m azụ mmiri oyi dị ọnụ ala, ọ dị afọ 9, ọ lanarịrị mmalite nke hypothermia, enweghị oxygen Ọkụ azụ ọzọ ataala m ọbụna dịka a ga-asị na ezughi oge Site n'oge ruo n'oge m na-eri nri, yabụ m chere na ọ ga-eso m ruo ogologo oge karịa, chiqui bụ ala niile
Azụ m bụ otu n’ime oroma dị afọ iri abụọ, na-anọ naanị ya mgbe niile na ebe azụ nọ, lita 20 ugbu a
Enwerem 2 azu azu m kariri 5 years
ENYEMAKA BIKO AMA M ONYE UNU UNU dijo
PESTIE DABỌCH 3 6, G DON DO KA M GA-EME 5BỌCH XNUMX XNUMX BSTP OFTA XNUMX?
Zaghachi iji nyere gi aka, ABASI M ONYE OGU GBA N’IME
Enwere m azụ azụ nke amaghị m ogologo oge ọ ga-adị ndụ mana ọ gaghị akwụsị ịkwaga
Zaghachi pollardo fernandez
Enwere m ụlọikwuu oroma. Enwere m ya n'otu akpa ahụ ha nyere m ya na eziokwu bụ na ọ na-ejide m nke ukwuu. Azụ dị afọ 5. Azụ a na-egosi ọkwa na ndụ m, azụrụ m ya mgbe Hiba nọ n'afọ mbụ nke ESO ma ugbu a, anọ m na ọzụzụ ọzụzụ m ghọtara ihe ọ bụ. Ọ bụrụ na otu n’ime ụbọchị ndị a apụọ, akụkụ m ga-eso ya. Ọ dị ka obere nwanne, n'agbanyeghị obere ha dị ntakịrị, ị hụrụ ha n'anya dịka ndị ikwu gị.
Gini mere na ekwughi oge ole ma o bu ole ndu?
Zaghachi iji kpakpando
My lebiasin ma ọ bụ puddle azụ dịrị ndụ ruo afọ 12 wee nwụọ dị ka agadi nwoke, ọ fọrọ nke nta hunched ma kpuo ìsì na otu anya, ma e wezụga ya fọrọ nke nta ọlaọcha-acha akwụkwọ ndụ na agba ọ gbanwere fọrọ nke nta ka oji na taa na afo. nwere mmasị n'ịchụ nta azụ dị ka guppies nke m na-enyekarị ya maka nri ...
Enwere m mmasị na azụ ha mara mma na e nwere ọtụtụ ụdị ekele maka ozi ahụ
Nzaghachi luis antago herrera betancourt
Azu m n'ime ogbe ahụ ebiela ihe karịrị afọ iri na ise, azụ azụ ọla edo m nwere ugbu a emeela agadi ma ka dị ndụ, ọ ga-abụ 15 ma ọ bụ 16 afọ ma ka….
Zaghachi Adriana Mazzantini